An-tapitrisany Ireo Nidina Eny An-dalambe Mba Haneho Fanohanana Ny Tolon’ny Vehivavy Eo Amin’ny Tantaran’i Espaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Marsa 2018 5:49 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Italiano, русский, Español
Olona dimy tapitrisa mahery (mety ho enina tapitrisa mihitsy aza) no nanao fitokonana tany Espaina tamin'ny 8 martsa mba hampiseho ny fanohanan'izy ireo ny tolona ho an'ny vehivavy amin'ny hetsika goavana iray izay heverin'ny maro ho fotoana manan-tantara eo amin'ny ady ho amin'ny fitovian-jon'ny lahy sy ny vavy.
Tena nahomby tokoa io hetsika io ary nahazo fitantaram-baovao iraisam-pirenena goavana. Manantona ny bolozin'izy ireo eny an-davarangana izay hetsika fanehoana firaisankina ataon'ireo tsy afaka mandray anjara amin'ny fitokonana noho ny asa na ny adidy an-tokantrano ireo vehivavy.
Iray amin'ireo antony lehibe nahatonga ny fitokonana ny fiantraika ara-toekarena tamin'ny krizy izay namely ny vehivavy kokoa noho ny lehilahy. 3,4% ambony kokoa ny tsy fananan'asan'ny vehivavy raha oharina amimn'ny tsy fananan'asan'ny lehilahy ary avo telo heny amin'ny lehilahy ny tsy fiarovana arak'asan'ny vehivavy. Ny elanelan-karama, araka ny tatitry ny Eurostat farany, dia 14.9% izay midika ho vola fanampiana ambany sy isanjato ambony ho an'ny vehivavy miaina olana ara-toekarena.
Fanampin'izany, nanampy tamin'ny fitomboan'ny fitokonana ny fampahalalam-baovao mahazatra sy ny media sosialy. Tao anatin'izay andro vitsy lasa izay, mitantara betsaka ny hevitr'ireo mpanao politika manan-kery indrindra tamin'ity fitokonan'ny vehivavy ity ny gazety. Nahitana fanohanana tsy misy fepetra avy amin'ireo mpitarika ny vondrona Unidos Podemos (‘Mahavita zavatra rehefa Miray’) ny fanehoan-kevitra, ary nisy koa ny fanehoan-kevitra mivaivay avy amin'ny PSOE izay nanohana ny fitakian'ny vehivavy fa tsy ny fitokonana, tao koa ny fitsipahana mivantana avy amin'ny Antokom-bahoaka izay mitantana ny firenena.
Tsara marihana ny fiovam-pijery goavana noraisin'ny ny Antokom-bahoaka. Tany am-piandohan'ny herinandro naneho hevitra ny mpikambana tao amin'ny antoko ary niampanga ny fitokonana ho mandrisika ny “fifandonana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy” ary mikasa ny “hanapotika ny maodelin'ny fiarahamonina tandrefana misy antsika”, milaza izany ho “tsy tompon'andraikitra, elitista (manindrahindra ny sangany) sy tsy mankasitraka”. Tamin'ny andron'ny fitokonana, nahataitra ny rehetra ny Filoha Mariano Rajoy tamin'ny fanohanany ny hetsiky ny mpandala ny vehivavy sy nandà ny fijerin'ireo mpitarika sasany ao amin'ny antokony, izay lasa lavitra mihitsy ny sasany tamin'ny fiampangana ny vehivavy ho sangany ary nanontany hoe “iza no hikarakara ireo zokiolona sy ny zaza tsy ampy taona? “:
Nahatonga ny vehivavy sasany ho tezitra ity fomba fijery ity, tahaka an'i “qwerty”, izay naneho hevitra tao amin'ny tranonkala:
Saingy nahatakatra ny anton'ireo fihetsiketsehana ireo ny ankamaroan'ny olona, toa an'i Carolina, izay nandray anjara tamin'ny adihevitra tao amin'ny tranonkala ihany koa:
Ny fiangonana katôlika koa dia naneho hevitra momba ny hetsika feminista, na dia mifanohitra aza ny heviny. Etsy ankilany, nilaza ny arsevekan'i Madrid, Carlos Osoro fa nahatakatra ny antony mahatonga ireo vehivavy manohana ny fitokonana satria tsy maintsy “hiaro ny zony” izy ireo, ary nofaranany hoe: “Te hanohana izany ihany koa aho, fa raha ny marina, efa manohana i Maria Virijiny.” Na dia izany aza, niresaka tamin'ny Radio Maria ny Eveka San Sebastian Ignacio Munilla, fanta-daza amin'ny fomba fijeriny mpandala ny nentin-drazana hiringiriny mampiadihevitra. Hoy izy:
#EsMachismoCuando (#OvianaNyMashisma) hitanao ny devoly amin'ny feminisma sy ny fitovian-jo saingy tsy hitanao amin'ny pederasty (toetran'ny lehilahy tia lehilahy) na pedophilia (fametavetana ankizy) izany.